ပက်ပ်ရဲ့ စည်းရုံးမှုမှာ အစ်တီဟတ်ဆီ နှလုံးသားကို သစ္စာဖောက်တော့မလား ရော်နယ်လ်ဒို? – Sports A2Z
ပက်ပ်ရဲ့ စည်းရုံးမှုမှာ အစ်တီဟတ်ဆီ နှလုံးသားကို သစ္စာဖောက်တော့မလား ရော်နယ်လ်ဒို?
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှာ အနာဂတ် မသေချာတော့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီး ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့အတွက် ချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာကို အလွတ်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ ဆာဂျီယို အဂွေရိုနေရာအတွက် ကမ်းလှမ်းခံထားရကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒီအနေအထားမှာတော့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဒေါ့မွန်ဂိုးသွင်းစက် အာလင်း ဟာလန်း၊ စပါးစ်တိုက်စစ်မှူး ဟာရီကိန်းနဲ့ ဘာစီလိုနာ GOAT ကြီး လီယွန်နယ် မက်ဆီတို့နဲ့ အကြီးအကျယ် သတင်းမွှေးခဲ့ပြီးမှ ရော်နယ်လ်ဒိုဘက်ကို မြှားဦးလှည့်လာခဲ့တာကတော့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဘက်က သူ့ကို လက်လွှတ်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတာနဲ့ ချိန်သားကိုက်သွားခဲ့တာပါ။
တူရင်ကလပ်နဲ့ ၁ နှစ် စာချုပ်သာ ကျန်ရှိတော့တဲ့ ပေါ်တူဂီသားဟာ နောက်ရာသီမှာ အလွတ်ထွက်ခွာခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီအခြေအ​နေကို အိုးလ်လေဒီတို့ဘက်က ရှောင်လွှဲသွားမယ်လို့ သိရသလို အဆုံးသတ်ကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်တိုက်စစ်မှူးကို ရှာဖွေနေတဲ့ မန်စီးတီးရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ပုံပြင်ဟာ ရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ အဆုံးသတ်သွားမလားလို့ တစထက်တစ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ကိုတော့ မျက်နှာပူစရာရှိနေတဲ့ CR7 အနေနဲ့ လက်ရှိစာချုပ်အခြေအနေအရတော့ စျေးကွက်တန်ဖိုးထက် ပိုသက်သာတဲ့ အနေအထားနဲ့ မန်စီးတီးကို ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရှိနေတာဖြစ်ပေမယ့် အိုးထရက်ဖို့ဒ်ရဲ့ ခါးသီးတဲ့ ရန်ဘက် မန်စီးတီးအတွက် ကစားဖို့ဆိုရင်တော့ နှလုံးသားကို သစ္စာမဖောက်နိုင်ဘူးလို့ အတိတ်မှာ ဆိုထားခဲ့ဖူးတာပါ။
“ယူနိုက်တက် မဟုတ်ဘဲ မန်စီးတီးအသင်းမှာ ကစားဖို့က တစ်သက်လုံးဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်နှလုံးသားက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ အတိုင်းထက်အလွန် ခက်ခဲတဲ့ ရွေးချယ်မှုပါ”လို့ ဆိုခဲ့တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ရေခဲတုံးလို အေးစက်တဲ့စကားက နည်းပြ ပက်ပ် ဂွါဒီယိုလာရဲ့ စည်းရုံးမှုအောက်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားအတွက် အရည်ပျော်သွားနိုင်တယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းခံထားရပါတယ်။
နည်းပြ ဂွါဒီယိုလာကတော့ “ကျွန်တော် ရိုးရိုးသားသားပဲ ပြောပါမယ်။ မန်စီးတီးမှာ ရော်နယ်လ်ဒိုလို၊ မက်ဆီလို၊ နေမာလို ကစားသမားမျိုးကို လိုအပ်နေပါတယ်။ ပွဲတိုင်း တဒိုင်းဒိုင်း ဂိုးသွင်းမယ့်သူကို ရှာဖွေနေတာကြောင့်ပါ။ သူ့ကြောင့် ပွဲတစ်ပွဲကို အလွယ်လေး အနိုင်ကစားနိုင်မယ့် ရော်နယ်လ်ဒိုကို ကျွန်တော်တို့အသင်းက အလိုရှိနေပါတယ်”လို့ ဆိုထားခဲ့ဖူးတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒီစကားအရတော့ ဘာစီလိုနာမှာ ခါးသီးပြိုင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုကို ဂွါဒီယိုလာအနေနဲ့ တံခါးဖွင့်ထားကြောင်း မီးစိမ်းပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပြီး ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှူးကြီးသာ အိုးထရက်ဖို့ဒ်ကို မျက်နှာလွှဲခဲပစ်ပြီး အီတီဟတ်ကွင်းကြီးမှာ ပူးပေါင်းသွားမယ့် ဇာတ်လမ်းဟာ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း ၁၀၀ အောက်မှာ ချောချောမောမောနဲ့ စျေးတည့်သွားဖို့လည်း ရှိနေကြောင်း တင်ဆက်ပေးပါရစေ။
ZAWGYI: ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းမွာ အနာဂတ္မေသခ်ာေတာ့တဲ့ တိုက္စစ္မႉးႀကီး ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္လ္ဒိုဟာ မန္စီးတီးအသင္းနဲ႔ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္လို႔ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ဘာစီလိုနာကို အလြတ္နဲ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားခဲ့တဲ့ ဆာဂ်ီယို အေဂြ႐ိုေနရာအတြက္ ကမ္းလွမ္းခံထားရေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဒီအေနအထားမွာေတာ့ မန္စီးတီးအသင္းဟာ ေဒါ့မြန္ဂိုးသြင္းစက္ အာလင္း ဟာလန္း၊ စပါးစ္တိုက္စစ္မႉး ဟာရီကိန္နဲ႔ ဘာစီလိုနာ GOAT ႀကီး လီယြန္နယ္ မက္ဆီတို႔နဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ သတင္းေမႊးခဲ့ၿပီးမွ ေရာ္နယ္လ္ဒိုဘက္ကို ျမႇားဦးလွည့္လာခဲ့တာကေတာ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းဘက္က သူ႔ကို လက္လႊတ္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာနဲ႔ ခ်ိန္သားကိုက္သြားခဲ့တာပါ။
တူရင္ကလပ္နဲ႔ ၁ ႏွစ္ စာခ်ဳပ္သာ က်န္ရွိေတာ့တဲ့ ေပၚတူဂီသားဟာ ေနာက္ရာသီမွာ အလြတ္ထြက္ခြာခြင့္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီအေျခအ​ေနကို အိုးလ္ေလဒီတို႔ဘက္က ေရွာင္လႊဲသြားမယ္လို႔ သိရသလို အဆုံးသတ္ေကာင္းတဲ့ ကမာၻ႔အဆင့္တိုက္စစ္မႉးကို ရွာေဖြေနတဲ့ မန္စီးတီးရဲ႕ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ပုံျပင္ဟာ ေရာ္နယ္လ္ဒိုနဲ႔ အဆုံးသတ္သြားမလားလို႔ တစထက္တစ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလာပါတယ္။
ယူႏိုက္တက္ကိုေတာ့ မ်က္ႏွာပူစရာရွိေနတဲ့ CR7 အေနနဲ႔ လက္ရွိစာခ်ဳပ္အေျခအေနအရေတာ့ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးထက္ ပိုသက္သာတဲ့ အေနအထားနဲ႔ မန္စီးတီးကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ရွိေနတာျဖစ္ေပမယ့္ အိုးထရက္ဖို႔ဒ္ရဲ႕ ခါးသီးတဲ့ ရန္ဘက္ မန္စီးတီးအတြက္ ကစားဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ႏွလုံးသားကို သစၥာမေဖာက္ႏိုင္ဘူးလို႔ အတိတ္မွာ ဆိုထားခဲ့ဖူးတာပါ။
“ယူႏိုက္တက္ မဟုတ္ဘဲ မန္စီးတီးအသင္းမွာ ကစားဖို႔က တစ္သက္လုံးျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ႏွလုံးသားက မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္မွာပဲ ရွိပါတယ္။ အတိုင္းထက္အလြန္ ခက္ခဲတဲ့ ေ႐ြးခ်ယ္မႈပါ”လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ ေရာ္နယ္လ္ဒိုရဲ႕ ေရခဲတုံးလို ေအးစက္တဲ့စကားက နည္းျပပက္ပ္ ဂြါဒီယိုလာရဲ႕ စည္း႐ုံးမႈေအာက္မွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားအတြက္ အရည္ေပ်ာ္သြားႏိုင္တယ္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းခံထားရပါတယ္။
နည္းျပ ဂြါဒီယိုလာကေတာ့ “ကြၽန္ေတာ္ ႐ိုး႐ိုးသားသားပဲ ေျပာပါမယ္။ မန္စီးတီးမွာ ေရာ္နယ္လ္ဒိုလို၊ မက္ဆီလို၊ ေနမာလို ကစားသမားမ်ိဳးကို လိုအပ္ေနပါတယ္။ ပြဲတိုင္း တဒိုင္းဒိုင္း ဂိုးသြင္းမယ့္သူကို ရွာေဖြေနတာေၾကာင့္ပါ။ သူ႔ေၾကာင့္ ပြဲတစ္ပြဲကို အလြယ္ေလး အႏိုင္ကစားႏိုင္မယ့္ ေရာ္နယ္လ္ဒိုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အသင္းက အလိုရွိေနပါတယ္”လို႔ ဆိုထားခဲ့ဖူးတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီစကားအရေတာ့ ဘာစီလိုနာမွာ ခါးသီးၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေရာ္နယ္လ္ဒိုကို ဂြါဒီယိုလာအေနနဲ႔ တံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္း မီးစိမ္းျပခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္ၿပီး ေပၚတူဂီတိုက္စစ္မႉးႀကီးသာ အိုးထရက္ဖို႔ဒ္ကို မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ၿပီး အီတီဟတ္ကြင္းႀကီးမွာ ပူးေပါင္းသြားမယ့္ ဇာတ္လမ္းဟာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေၾကး ေပါင္သန္း ၁၀၀ ေအာက္မွာ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာနဲ႔ ေစ်းတည့္သြားဖို႔လည္း ရွိေနေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးပါရေစ။
ပေါင် ၄၉၁ သန်းတန်တဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့လူစာရင်း လိဒ်စ်နဲ့ပွဲမှာ ဘယ်လိုပွဲထွက်လာမလဲ
ခရစ္စတီယာနိုလား? လီယွန်နယ်လား? ဂရင်းဝုဒ်ပြောပြီ